Zvinodhura zvakadii kuita Chipikiri Chechipikiri? Ndeapi Nail Art yakachipa uye yakanaka
Vazhinji vasikana vanoda kugadzira zvipikiri kuita kuti minwe yavo iratidzike chena, asi havazive kuti zvinoda marii kuita chipikiri, saka ivo vanowanzonzwa vachinyengedzwa nemanicurist mushure mekuita chipikiri. Heano wepakati mutengo weakakodzera zvipikiri art kune yako mareferenzi. Chaizvoizvo, iyo mitengo yezvigadzirwa ...
Ko nzara dzinozoita kuonda uye kuonda kana ini ndichiita hunyanzvi pamwe neiyo gel polish?
Vazhinji vasikana vanofunga kuti kuita zvipikiri kuchaita kuti nzara dzavo dzive dzakaonda uye dzive dzakaonda, dziite nyore kuputsa, uye zvinounza kusagadzikana muhupenyu. Saka, ndizvo zvazviri chaizvo here? Vasikana vanoda chipikiri art havagoni kumirira kuti vachinje zvipikiri zvavo zuva rega rega, asi panguva imwe chete, boka revanhu haridi ...
Ndeapi matatu akakosha ezvipikiri polish uv gel yemisumari salons
Kunze kwemamwe maturusi ekutanga ekuvhura salon yezvipikiri, zvigadzirwa zvechipikiri uye marambi akakosha. Zvino iwe unoziva here izvo zvitatu zvakakosha UV zvipikiri zvipikiri? Mumamiriro ezvinhu akajairwa, iwe unofanirwa kugadzirira angangoita matatu mabhurosi eiyo nzara polish gel kuvhura chipikiri salon. Mhando nhatu dzechipikiri ...
Matipi eiyo gel chipikiri penda pasina kushandisa mwenje
Iyo ngano diki iyo inowanzo ita hunyanzvi neiyo gel gel polish zvigadzirwa zvinofanirwa kuziva kuti pese panogadzirwa chipikiri gel, inoda kudziirwa nekusimbiswa mumwenje wekubheka, saka unoziva here kuti ndeapi matipi ekushandisa iyo chipikiri gel kupolisha. kumba usina kubatidza mwenje? Kazhinji, chipikiri s ...
Taura nezve UV gel chipikiri polish zvigadzirwa
Chipikiri polish UV gel, yanga ichishandiswa zvakanyanya muindasitiri yezvipikiri mumakore achangopfuura. Nekuda kwehunhu hwekupenda kwembambo pachahwo uchienzaniswa neyakajairika nzara, iyo UV gel chipikiri polish inoshamwaridzana nharaunda, haina-chepfu, ine hutano uye yakachengeteka. Uye zvakare, Inoenderana neyakajairika bhenefiti ...
Akanaka manicure, mafashoni manicure anokwezva zvakanyanya, epamberi uye anogona pakarepo kusimudzira iyo giredhi
Kuita kuti maoko ako aratidzike kuve runako, pano goverana mamwe ezvipikiri zvitaera uchishandisa chipikiri gel polish zvigadzirwa zvinogadzirwa neNew color runako, ndinovimba unozvifarira: Zvisinei kana iri dhizaini yakapusa kana dhizaini yakaoma, tarisiro haisi pa nhamba yezvishongedzo, asi ruzivo. Chipikiri chakareruka ...
About Nail UV gel Polish, kuve nerakajeka muhupenyu hwako
Chipikiri UV gel polish Ruvara gel kupolish ikozvino inogona kutaridzwa sechiitiko chinowanzoitwa muzvipikiri salons. Pakutanga, zvipikiri zvainyanya kupatsanurwa kuita zvipikiri zvekristall uye zvipikiri zvephototherapy, asi izvozvi nzara dzekristaro hadziwanzoonekwa. Phototherapy zvipikiri zvinofanirwa kuvezwa nemwenje yeultraviolet mushure mekushandisa pho ...
Ndeupi musiyano uripo pakati peyepasi uye inodhura nzara polish?
Munyika yenzara gel kupolisha, pane akasiyana mavara, mafomula, epamusoro marapirwo uye mitengo. Asi ndeupi musiyano uripo pakati peyeusi yakachipa yechipikiri UV mumapurmesi uye bhodhoro remadhora makumi mashanu emazita ezita rezita muzvitoro zvepamusoro, uye pakati pevazhinji masalon uye yakazvimirira yechipikiri cheUV ...
Nezve chipikiri gel kupolisha, ita kuti vasikana vawedzere runako uye chivimbo
Chipikiri gel kupolisha, kwave kuchishandiswa zvakanyanya muindasitiri yezvipikiri mumakore achangopfuura. Nekuda kwehunhu hwekupenda kwembambo pachahwo uchienzaniswa neyakajairika nzara, Ruran Chemical chipikiri polish inoshamwaridzana nharaunda, haina-chepfu, ine hutano uye yakachengeteka. Uye zvakare, Inoenderana neyakajairika bhenefiti ...
Makumi ezviuru emakambani ane chekuita nezvipikiri anowedzera gore rino kuChina
ne admin pane 20-10-25
Chirevo chakanzi "Masiki Anogona Kugadzira" Lipstick Index "Kufa" ichangoburitswa paUSA "Fortune" magazini webhusaiti yakati pasi pechirwere ichi, "Lipstick Index" inogona kunge iine imwe nzira-iyo "nzara gel kupora maitiro." Maererano t ...
Iyo "lipstick athari" isingatarisirike yakundikana! Nei indasitiri yechipikiri gel yekupolish yave yekuhwina muhombe?
Chero nguva iyo hupfumi paunopinda muchikamu chakaderera, pachagara paine vanhu vanotaura nezve "lipstick athari." Sechinhu chisina kukosha pamutengo wakaderera, mune inoshamisa nguva iyo munhu wese achibata zvikwama zvavo uye achishandisa mari nokungwarira, "lipstick" haingogone kuve ...
Nail gel polish indasitiri inova imwe yeanobudirira maindasitiri mushure mehosha:
Zvisingatarisirwi, indasitiri yakawedzera zvakanyanya mushure mehosha iyi inogona kuve hunyanzvi hwembambo - Gel polish inosanganisira color gel polish, base / top gel, polygel, builder gel, kupenda gel, maziso ekati, emboss gel, gel gel uye gel polish kit yakaiswa uye zvichingodaro. Kana masiki akavhara kumeso kwavo, vakadzi vazhinji vanoisa ...
Tsamba yemashoko Ramba wakashongedzerwa neZvidzo